झोले बोर्डिङ बन्द - Shikshak Maasik
झोले बोर्डिङ बन्द
by • • 2071_12, समाचार • Comments (0) • 598
काठमाडौं जिशिकाले अनुमति लिएर सञ्चालन नगरेका ५४ वटा झोले निजी स्कूल खारेज गरेको छ । अनुमति लिएर पनि सञ्चालन नभएका अरू स्कूल खोजेर तिनलाई पनि खारेज गर्ने तयारी गरिएको जिशिका काठमाडौंले जनाएको छ । सञ्चालकहरूबीच झगडा अनि विद्यार्थी अभावका कारण स्वीकृतिपछि सञ्चालन नगरिएकाले त्यस्ता विद्यालय खारेज गरिएको सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी द्वारिका पोखरेलले बताए ।
सञ्चालनको अनुमति लिने र विद्यालय झोलामै लिएर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि भक्तपुरमा २८ वटा झोले निजी स्कूल यसै वर्षखारेज गरिएको भक्तपुरका जिशिअ रमाकान्त शर्माले जानकारी दिए । विद्यालयलाई नाफा कमाउने वस्तुका रूपमा लिई झोलामै खरिद बिक्री भइरहेको पाएपछि विकृति रोक्न खारेज गरिएको जिशिअ शर्माले बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरले पनि यस वर्षनिजी विद्यालयको विवरण अध्यावधिक गरी झोले विद्यालय पहिचान गर्न स्रोतव्यक्ति मार्फ लगत संकलन गरिरहेको छ । सञ्चालित विद्यालय अस्तित्वमा रहे विवरण टिप्ने, अन्यथा ३५ दिने सूचना छिट्टै जारी गरी त्यस्ता स्कूल खारेज गरिने ललितपुरका सहायक जिशिअ खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।
संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको अनुमतिका लागि प्राविमा ५० हजार, निमाविमा १ लाख ५० हजार, माविका लागि २ लाख रुपैयाँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा धरौटी राख्नुपर्छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि जिशिकाले सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ । तर स्कूल सञ्चालनको अनुमति लिने र सञ्चालन गर्नुको साटो किनबेच गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यस्ता स्कूल खारेज गर्न थालिएको जिशिकाहरूले जनाएका छन् ।
शिक्षाका निम्ति दान
खेमराज पुन पेशाले बुटवलका औषधि विक्रेता हुन् तर उनको सोख भने शिक्षा र समाज सेवा गर्न रहेको देखिन्छ । २०१९ सालमा गुल्मीको भार्से मा जन्मिएका पुनले आफ्नो आर्जनको उल्लेख्य अंश शिक्षा र समाज सेवाको क्षेत्रमा खर्च गर्न थालेको धेरै वर्षभइसकेको छ ।
पुनले समाज सेवाको थालनी आफैले पढेको स्कूल, जनसहयोग मावि, भार्सेगुल्मी) बाट गरेका हुन् । त्यहाँ उनले २०६५ सालमै दाजुहरू मीनबहादुर र ऋषिराज रु. ५०/५० हजार तथा आफ्नो तर्फाट रु. ६ लाख राखेर मातापिताको नाउँमा ‘मन–गौरी पुन छात्रवृत्ति‘ अक्षयकोष स्थापना गरे । सो कोषबाट आर्थिक अभावमा स्कूल जान नपाएका र गएर पनि बीचैम पढाइ छोड्न बाध्य बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरिएको छ । अहिलेसम्म सो कोषबाट १७ जना बालबालिका लाभान्वित भइसकेका छन् ।
खेमले आफ्नो जन्मस्थान भार्से चौतारो, शौचालय र खानेपानीको व्यवस्था लगायतका समाज सुधारका काम गर्दै आएको ‘कला पुन आमा समूह‘ मा पनि रु. १ लाख ५० हजार नगद सहयोग गरेका छन् । यो आमा समूह खेमकी हजुरआमाको नाममा स्थापना गरिएको हो ।
त्यसै गरी पुनले आफ्नो ५१ औं जन्मदिनका अवसरमा आफू र पत्नीको नाममा ‘खेम ओमी पुन कल्याणकारी प्रतिष्ठान‘ स्थापना गरेका छन् । उनले उक्त प्रतिष्ठानबाट खर्च गर्ने गरी रु. १७ लाखको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । १७ मंसीर २०७१ मा रु. ८ लाख थप गरी अहिले अक्षयकोषको रकम रु. २५ लाख पुर्‍याइएको छ । यो प्रतिष्ठानले पनि मूल कार्यक्षेत्रका रूपमा विपन्नहरूको शिक्षालाई नै रोजेको छ । त्यस अनुरूप प्रतिष्ठानले तानसेन जेलमा कैदी आमासँग बस्न बाध्य ८ जना बालबालिकालाई जेलभित्रै पठनपाठनको व्यवस्था मिलाएको छ । प्रतिष्ठानले यी बालबालिकालाई नास्ता, शैक्षिक सामग्री र पोशाक उपलब्ध गराइएको छ । ती बालबालिका पढाउन व्यवस्था गरिएका शिक्षकलाई पनि प्रतिष्ठानले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
बीडीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका नरेन्द्र निरिषलाई पनि खेमकै प्रतिष्ठानले अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । उनी अहिले भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा बीडीएस अध्ययनरत छन् । र्
दर्जनौ सामाजिक संघ/संस्थामा क्रियाशील पुन अमेरिका, युरोप, क्यानडा लगायत संसारका धेरै मुलुक घुमेका छन् । विकासका लागि सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति नै ‘नेपालीको पछौटेपन‘ को प्रमुख कारण ठान्छन् उनी । विकसित देशका विद्यार्थीले आफ्नो खाजा खर्च कटौती गरेर विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा लागानी गरेको देखेर उनी समाज सेवा गर्न प्रेरित भएका हुन् । आफू जस्ता थोरबहुत कमाउने नेपालीले आफ्नै देशका विपन्नलाई सहयोग गरेमा नेपालको समृद्धिमा योगदान पुग्ने खेमको विश्वास छ । धन र मन दुवैका धनी खेमराज पुनलाई साधुवाद ।
अवकासपछि पढाउनेको तलब असुली
कानुनतः शिक्षकले ६० वर्षउमेर नाघेपछि अवकाश पाउँछन् । तर, अवकाश पाउने उमेरपछि पनि निरन्तर पढाउने शिक्षकले खाएको तलब शिक्षक किताबखानाले असुलउपर गरेको छ । विद्यालय शिक्षक किताबखानाले यस वर्षबढी तलब लिएका ७७ जना शिक्षकबाट १ करोड २४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ । गत वर्ष१२९ जनाबाट २ करोड ४९ हजार २ सय रुपैयाँ असुल गरेको थियो । विद्यालय शिक्षक किताबखानाले हरेक वर्षअवकास हुन लागेका शिक्षकको नामावली सम्बन्धित जिल्लामा पठाउँदा समेत त्यसउपर बेवास्ता गरी बसेका शिक्षकको नियम अनुसार नै रकम असुल्नुको विकल्प नभएको विद्यालय शिक्षक किताबखानाका उपनिर्देशक होमनाथ न्यौपानेले बताए ।
लेन बड्स स्कूललाई ४ लाख पुरस्कार
ए प्लस बिजनेस लिंकले सञ्चालन गरेको ‘ए प्लस धमाका लक्की ड्र‘ मा काठमाडौं ग्लेन बड्स सेकेण्डरी स्कूलले रू.४ लाख पुरस्कार जितेको छ । बालबालिकालाई लक्षित गरेर विभिन्न खेलौना र अन्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएको ए प्लस बिजनेस लिंकले ‘प्रतिभाशाली विद्यार्थी, स्कूल प्रोत्साहन योजना‘ ल्याएको हो । यो योजनामा एक सय ५० विद्यालय सहभागी थिए । गोलाप्रथाद्वारा विजेता छनोट गरिएको ए प्लस बिजनेस लिंकका प्रबन्ध निर्देशक आविष्कार श्रेष्ठले बताए ।